आफ्नै बिचारसंग किन बिचलित छन् चित्रबहादुर केसी ! - Lekbesi Khabar
आफ्नै बिचारसंग किन बिचलित छन् चित्रबहादुर केसी !
आगामी मंशिर १४ गते सम्पन्न हुन गईरहेको उपनिर्वाचनमा वाग्लुङ क्षेत्र नं २ (ख) को उमेदवारी सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेता चित्र बहादुर केसीका बिषयमा केही जिज्ञासाहरु राख्न सान्दर्भिक ठानेको छु । चित्र बहादुर केसी जी नेपाली वामपन्थी राजनीतिका अव्वल दर्जाका पाका नेता हुन् भन्ने बिषयमा दुई मत छैन । उहाँले नेतृत्व गरेको दल सानो भए पनि अस्तित्वमा छ । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा पनि निकै सचेत देखिनु हुन्छ ।
चित्र बहादुर केसी जी र उहाँको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा वर्तमान संविधानको संघीय प्रणाली संग असहमत छन् र आफ्ना असहमति सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । संघीयता राष्ट्रले धान्न नसक्ने र देशलाई प्रदेशमा विभाजन गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने वहाँहरुको तर्क छ । यो विचारसंग सहमति असहमति जे भए पनि सम्मान नै गर्नुपर्छ ।
चित्र बहादुर केसी जी र वहाँको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान संघीय संविधान प्रति असहमत हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी भए पश्चात् तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली जी नेतृत्वको सरकारमा उप -प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिनु भयो । आफु असहमत भएको संविधान लागू गर्ने , उक्त संविधान बमोजिम नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्ने र लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको उप- प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन हुनु वहाँको गम्भीर त्रुटि थियो । आफुले विरोध गरेको र असहमति रहेको संविधान बमोजिम अति उच्च पदमा रहनुमा भने वहाँको राजनीतिक ईमानदारीता देखिएन बरु जीवनको उत्तरार्धमा पदलोलुपता झल्कियो ।
संघीयताको मुल आधार भनेको प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकार हो । यदि प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारको व्यवस्था संविधानमा नहुने हो भने हाम्रो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको रुपमा रहँदैन । जुन नेता र दल संघीय प्रणालीमा विश्वास नै गर्दैन सोही नेता र दलले अब सम्पन्न हुँदै गरेको उप-निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यमा उमेदवारी दिनु र प्रतिश्पर्धा गर्नुलाई वहाँहरुको वैचारिक विचलन मान्नु पर्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धा गर्दा प्रदेश सत्ता आरोहणका लागि मत माग्ने कि प्रदेश खारेजीका लागि भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो उमेदवारी समिकरणका हिसाबले सत्ताधारी नेकपासंग गरेकाले नेकपाको सरकारको जस अपजसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ । संघीयता खारेजीको आफ्नो विचारलाई पनि संवोधन गर्नुपर्ने बाध्यता उमेदवार र चित्र बहादुर जीमा छ । यस्तो परिस्थितिमा चित्र बहादुर के सी जी र वहाँको दलले यस उप निर्वाचनमा उमेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न निकै कठिन देख्दछु । जे होस् वहाँहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भाग लिनुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ र यसको फैसला त्यस क्षेत्रका मतदाताले नै गर्नेछन् ।
लेखक नेपाली कांग्रेस धादिङका नेता हुन् ।
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:२९ November 10, 2019
भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विरोधमा दूतावास अगाडि सत्तारुढ विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शन